Apple actualiza su web de educación con mucha información adicional | Actualidad iPhone
Apple manavao ny tranokalan'ny fanabeazana miaraka amin'ny fampahalalana fanampiny maro
Vaovao IPad | | iOS, iPad, About us, Apple products
Volana vitsivitsy lasa izay dia nilaza taminay izahay fa ny drafitra fihenam-bidy ho an'ny "fanabeazana" dia efa misy amin'ny fitaovana Apple maro izay ahafahantsika manangona hatramin'ny 80 euro raha mividy Mac na 40 isika raha mividy iPad. Noho ireo karatra fanomezana ireo, ny mpianatra dia afaka mividy karazana fampiharana, mozika, boky, horonan-tsary, sarimihetsika ... Raha ny teôria dia manampy ilay mpianatra izy ireo.
Toy ny fanao nandritra ny taona vitsivitsy, Apple dia manavao indray ny tranokala manokana natokana ho an'ny fanabeazana miaraka amin'ny vaovao, fehezanteny mampihetsi-po, ohatra manafana ny fo, ary fampiharana izay manampy ny mpampianatra hampianatra sy ny mpianatra hianatra tsara kokoa. Aorian'ny fitsambikinana dia mamakafaka izahay andian-teny sasany napetrak'i Apple tao amin'ny tranonkalany fanabeazana ary mieritreritra ny hianatra miaraka amin'i Apple izahay.
1 Fampianarana ho an'i Apple
2 Ny iPad any am-pianarana
3 Ny Mac ao an-dakilasy
4 Fanabeazana manokana amin'ny fitaovana Apple
5 Tantara tena izy amin'ny fanabeazana miaraka amin'i Apple
Fampianarana ho an'i Apple
Mino izahay fa ny teknolojia dia manana fahefana hanova efitrano fianarana. Afaka manokatra làlana eritreritra vaovao izy io. Fomba vaovao hametrahana hevitra. Na izany aza, tsy niova ny fototra iorenany: fanoloran-tena ho an'ny fianarana izay efa ampahany tamin'ny ADN-nay hatrany. Faly izahay miara-miasa amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra hamerina ny dikan'ny hoe mampianatra sy mianatra. Ary miaraka manao zavatra tsy noeritreretinay ho vitantsika mihitsy isika.
Miaraka amin'ity "andalana" kely ity dia manomboka ny Apple fanadihadiana momba ny lafiny samihafa amin'ny fanabeazana. Nandritra ny fampielezan-kevitra (internet) iray manontolo dia hitantsika ny fitazonana endrika madio miaraka amin'ny estetika mitovy amin'ny fampielezana fanta-daza: "Namboarin'i Apple any California."
Mandritra ny tranokalan'ny fampianarana Apple dia afaka mahita ny vokatra paoma isan-karazany miaraka amin'ny ohatra azo ampiharina, sary tsy mampino ary mazava ho azy, ny ankizy sy ny mpampianatra mampiasa ireo vokatra ireo.
Ny iPad any am-pianarana
IPad dia manova ny fomba fampianarantsika sy hianarantsika. Fitaovana mamorona mahery vaika, boky mifanakalo hevitra ary tontolon'ny fampiharana sy atiny ho an'ny fahafaha-mianatra maharitra. Izy rehetra ao anaty fitaovana iray dia tian'izy ireo hampiasa.
Afaka taona vitsivitsy, hoy aho hanjavona ireo boky amin'ireo efitrano fianarana manome làlana amin'ireo singa teknolojia ankehitriny toa ny iPad na ny Mac. Aleoko kokoa ny Mac, saingy amin'izao fotoana izao dia andrim-panjakana maro no mampiasa ny iPad ho fitaovana ianarana.
Tombony amin'ny fampiasana iPad amin'ny fanabeazana
Mora raisina an-tsoratra
Fampiharana izay manampy antsika hianatra
Ny Mac ao an-dakilasy
Mahatalanjona mahery sy mora ampiasaina. Nandritra ny telopolo taona dia nanome ny mpianatra ny fahaizana mamorona ao an-dakilasy ny Mac. Ary manohy manampy amin'ny famoahana ny fahafahan'ny mpianatra tsirairay izany.
Miaraka amin'ny programa matanjaka toa an'i Garageband, Keynote, Nums, Pejy, iPhoto, Final Cut Pro, iMovie amin'ny Mac dia afaka jerentsika izay ampiasain'izy ireo izany mba hahazoany tombony betsaka amin'ny fahaizany. Mieritreritra ny handamina ny asany izy ireo ary mahita ny lafiny misy sary an-tsaina kokoa izahay amin'ny fakantsary mampiasa iMovie na Final Cut Pro X.
Mac amin'ny oniversite iray dia tena ilaina tokoa satria miaraka amin'ny fampiharana ny Mac App Store ahoana no mety ho Evernote, iWork, iLife, Solar Walk na The E Element dia ampifandraisina ary ampifandraisina amin'ny fahafahan'ny mpianatra ao am-pianarana. Ary na izany aza, mianatra bebe kokoa izy ireo.
Tombony amin'ny Mac Book ao an-dakilasy
Isan'ny fampiharana ao amin'ny Mac App Store
Ny fahatsorana amin'ny fampiasana noho ny OS X
Fitaovana azo idirana
Fanabeazana manokana amin'ny fitaovana Apple
Mino izahay fa ny teknolojia dia afaka manolotra fitaovana fianarana lehibe ho an'ny ambaratonga rehetra amin'ny fianarana. Ny fitaovana iOS sy Mac rehetra dia misy fiasa vaovao azo idirana.
Ny iray amin'ireo zavatra eritreretin'ny injenieran'ny Apple indrindra dia ny fahazoana miditra ny vokatra rehetra ao aminy ny olona rehetra (na amin'ny fanabeazana aza). Fa tsy ny injeniera ihany no mieritreritra an'izany, fa ireo izay mampivelatra ny iOS, OS X, ny ergonomics Mac… Tokony hisy vokatra iray azon'ny rehetra aleha, eny fa na dia ireo izay tsy vintana aza mba manana aretina toy ny Down Syndrome...
Ary amin'ny zavatra niainako madio dia fantatro izany saika ny vokatra Apple rehetra dia namboarina ho an'ny ankamaroan'ny olona Afaka miditra amin'izy ireo izy ireo, amin'ny fampiasana ireo fitaovany Accessibility sy ny famolavolana ireo fitaovana: Mac, iPod, iPhone, iPad ...
OS X amin'ny fanabeazana manokana
Lahatsoratra ho an'ny lahateny (VoiceOver)
Facetime sy iMessages
iOS amin'ny fanabeazana manokana
Tantara tena izy amin'ny fanabeazana miaraka amin'i Apple
Jereo ny aingam-panahy any am-piasana. Jereo ny fampiasan'ny mpampianatra sy ny sekoly manerantany ny vokatra Apple hamerenany ny fahalalana.
Mazava izany samy mila miditra an-tsehatra ny mpampianatra sy ny mpianatra ka ny fianaranao dia mandeha amin'ny hery mankany amin'ny tanjaka, vao mainka koa raha teknolojia vaovao no resahina. Ao amin'ity fizarana ao amin'ny tranokalan'ny fampianarana Apple ity dia miresaka momba ny tena tantara momba ny fiasan'ny fampianarana amin'ny fitaovana Apple (iOS sy OS X) izahay.
Fanazavana fanampiny - Miverina any am-pianarana. Apple dia tsy nampoizina tamin'ny fampidirana ny iPhone tamin'ny fampiroboroboany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Apple manavao ny tranokalan'ny fanabeazana miaraka amin'ny fampahalalana fanampiny maro
Asphalt 8: Airborne, nanandrana ny lalao fiara farany an'i Gameloft izahay
NetworkList: fidio ny teny miafina tsianjery momba ny wifi anao avy amin'ny sehatra (Cydia)